ITALIE: MITADY HITSOAKA AN-DAHARANA NY MPITSABO…
Italie hatrany no mitana ny laharana voalohany amin’ny isan’ny olona maty. 760 indray no ripaka tao anatin’ny 24ora. Tafiakatra 13 915 ny maty. 4668 ny tranga vaovao voamarina, izay mitovitovy amin’ireo efatra andro lasa ihany. Manomboka mitaintaina amin’ny faharerahana tafahoatra ny mpitsabo, ary manomboka mitsoaka ny hopitaly dieny mbola tsy tandindonin-doza loatra ny ainy, ary indrindra mbola tsy nifindran’ny valanaretina. Tratry ny tsindry tanteraka amin’ny hamahana ny fihibohana sy tsy fahafahana mivoaka ny trano ny governemanta kanefa mety hohalavaina hatramin’ny tapaky ny aprily farahafahakeliny.
ESPAGNE: TRATRA NY ISA 10 000
DONALD TRUMP: “HO HENJANA IO HERINANDRO IO”
Ny 85% amin’ny Amerikanina amin’izao fotoana izao no mihiboka tsy mivoaka ny trano. Manahy ary efa nilaza ny Filoha Donald Trump fa ho henjana iny herinandro ho avy iny. Efa mieritreritra hahatratra 100 000 hatramin’ny 240 000 ny ho fatin’ny coronavirus. Mahatratra 216 000 ny voa any amin’ity firenena ity, ary 5116 ny efa maty, ka ny 884 no maty tao anatin’ny iray andro, izay sokajiana ho isan’ny maty be indrindra tao anatin’ny iray andro tany an-toerana hatreto. Mitontongana ny toekarena, ary betsaka ny very asa. Tao anatin’ny andro vitsy izao dia tafiakatra 6,6 tapitrisa ny taratasy fangatahan’asa voaray. Mafy noho ny krizy tamin’ny 2008 ity, hoy ny Filoha Amerikanina.
PHILIPPINE: TIFIRINA HO FATY IZAY TSY MANAJA NY FIHIBOHANA
BANKY IRAISAM-PIRENENA: HANETSIKA 160 MILIARA DOLARA
BRITISH AIRWAYS : MPIASA 28 000 VERY FIHINANANA
Nanapa-kevitra ny Kaompania Britanika British Airways fa hampitsahatra mpiasa 28 000, izay manome 60% amin’ny mpiasa rehetra manodina ity orinasa goavana eo amin’ny tontolon’ny fitaterana an’habakabaka ity. Miandry ny fivoaran’ny toe-draharaha ireo, fa naman’ny mihantona tanteraka amin’ny asany izany hatreto. Ny orinasa Amerikanina Boeing ihany koa dia manomana « plan de départs volontaires » na drafi-pialana an-tsitra-po ho an’ireo mpiasa, izay hivoaka amin’ny antsipirihany amin’ny herinandro ambony. Ny Vondron’orinasa Accor, izay misehatra amin’ny tontolon’ny fandraisam-bahiny kosa dia nanapa-kevitra nanakatona ny 2/3n’ireo hoteliny maneran-tany.